display နှစ်ခု (HDMI switcher) ပါသည့်ကွန်ပျူတာနှစ်ခုကိုအသုံးပြုနည်း🥇 Emulator.online ▷🥇
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပျူတာများနှင့်အလုပ်များစွာလုပ်ပါ၊ ပြင်ဆင်ပါ၊ ကွန်ပျူတာစတိုးဆိုင်တစ်ခုပြုလုပ်ပါ၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်တွင်အကြောင်းအရာအလိုက်ဆောင်းပါးများကိုရေးမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်စားပွဲခုံနှစ်ခုနှင့်မော်နီတာတစ်ခုစီသုံးနိုင်သည်။ ဤအခြေအနေတွင် HDMI ကြိုးတစ်ခုတည်းကို အသုံးပြု၍ HDMI port ကိုအလွယ်တကူလက်လှမ်းမမှီသောကြောင့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှတစ်လုံးသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်မလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင်ကွန်ပျူတာနှစ်ခုလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းအသုံးပြုရန်အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ ကျွမ်းကျင်သော IT ကျွမ်းကျင်သူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုကိုလောင်းနိုင်သည် HDMI အချက်ပြမိတ္တူ O HDMI ခလုတ်သီးခြားအသံ / ဗွီဒီယိုစီးဆင်းမှုနှစ်ခုကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီးထိုအချိန်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာပေါ် မူတည်၍ မည်သည့်ကွန်ပျူတာကိုဖန်သားပြင်သို့ ဦး စားပေးမည်ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောမော်နီတာသို့ပေးပို့နိုင်သည်။
ဒီလမ်းညွှန်ထဲမှာမင်းကိုပြမယ် မော်နီတာတစ်ခုမျှဝေရန်ကွန်ပျူတာနှစ်လုံးကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ, အသုံးပြုရန် HDMI ကေဘယ်ကြိုး ၃ ခုကိုသေချာရွေးချယ်ပြီးအမေဇုန်တွင်ရရှိနိုင်သည့်မော်ဒယ်များတွင်အသုံးပြုရန်မည်သည့်ခလုတ်ကိုရွေးချယ်သည်။ သီးခြားအခန်းတစ်ခုတွင် USB switch များမည်သို့သုံးရမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ input device များ (ကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်) ကိုကွန်ပျူတာတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလွှဲပြောင်းပေးရန်ကိုလည်းလေ့လာမည်။
အဖတ်ကိုလည်း: တိုးချဲ့ထားသော desktop PC တွင်မော်နီတာနှစ်ခုကိုစီမံပါ
မော်နီတာတစ်ခုနှင့်အတူ PC နှစ်ခုကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
ဤမျှဝေထားသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မော်နီတာတစ်ခု၊ ပုံသေကွန်ပျူတာ (၂) ခု (သို့မဟုတ် PC နှင့် laptop၊ PC နှင့် Mac Mini တို့ပင်)၊ သင့်လျော်သောအရှည်ရှိ HDMI cable သုံးခုနှင့် switch တစ်ခုရှိရမည်။ HDMI port နှစ်ခုကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး output တစ်ခုတည်းထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း HDMI သည် monitor ၏ HDMI port သို့ရောက်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာအသစ်ကိုမ ၀ ယ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ထဲမှအကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်များအားလုံးကိုဖတ်ရန်သင့်အားအကြံပြုပါသည် ကွန်ပျူတာအသစ်မဝယ်ခင်သိထားသင့်တဲ့အရာများ.
သင့်လျော်သော HDMI ကြိုးများကိုရွေးချယ်ပါ
ဤပုံစံအတွက် HDMI ကြိုးသုံးခုလိုအပ်လိမ့်မည်။ တစ်ခုမှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက်“ PC 1”၊ အခြားတစ်လုံးကို“ PC 2” နှင့်နောက်ဆုံးရွေးချယ်ထားသော HDMI ကေဘယ်လ်ကိုရွေးချယ်သောကွန်ပျူတာအတွက်ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ။
အကယ်၍ switch ကို desktop ပေါ်တွင်ထားလိုပါက PC 1 နှင့် PC2အတွက် cable နှစ်ခုသည်လုံလောက်စွာရှိရမည် (အနည်းဆုံး ၁.၈ မီတာရိုးရာပုံသေကွန်ပျူတာများအကြားအကွာအဝေးကိုလည်းဖုံးအုပ်ရန်။ အောက်တွင်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်သင့်လျော်သော HDMI ကေဘယ်လ်များစာရင်းဖြစ်သည်။
အဆင့်မြင့်မြန်သော HDMI ကေဘယ်လ်၊ နိုင်လွန်ကြိုး၊ ၁.၈ သန်း (ယူရို ၆)
4K HDMI ကေဘယ်ကြိုး ၂ မီတာ SUCCESO (ယူရို ၇)
Cavo HDMI 4K 2m၊ Snowkids Cavi HDMI 2.0 (€ 9)
ခလုတ်ကိုမော်နီတာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် cable သေးသေးလေးကိုသုံးနိုင်သည်။၁ မီတာသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း), စားပွဲပေါ်အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောနေရာယူဖို့, switch ကိုတိုက်ရိုက်မော်နီတာအောက်မှာ (သို့မဟုတ်၎င်း၏အခြေစိုက်စခန်းပေါ်တွင်) ထားပါ။ အောက်တွင် HDMI cable များကိုအတိအကျဖော်ပြထားသည်။
AmazonBasics - Cavo Ultra HD HDMI 2.0 0,9m (ယူရို ၆)
IBRA Cavo HDMI 4K Ultra HD 1M (ယူရို ၈)
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသာထင်ရှားစွာကျွန်ုပ်တို့တွင်စုစုပေါင်းလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခွင့်ရှိသည်။ ချိတ်ဆက်ရမည့်ကွန်ပျူတာများ၏အနေအထားနှင့်အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ရှည်လျားသောကေဘယ်ကြိုး ၃ ခု၊ တိုတောင်းသောကေဘယ် ၂ ခုနှင့်အရှည် ၃ ခုတိုတိုကေဘယ်ကြိုးများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောအရေးကြီးသောအရာသည် ကောင်းသောအရည်အသွေးသုံး HDMI ကေဘယ်လ်ကြိုး လမ်းညွှန်၏ကျန်နှင့်အတူဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီ။ HDMI cable နှင့်တွဲဖက်သောအတိုကောက်ဝေါဟာရများကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါကကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်ဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုလိုပါသည် မှန်ကန်တဲ့ HDMI cable ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ.
လက်ျာ HDMI switch ကိုရွေးချယ်ပါ
HDMI ကေဘယ်ကြိုးများကိုအသုံးပြုသည်ကိုတွေ့မြင်ပြီးသည့်အခါသင့်အားခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ကွန်ပျူတာနှစ်ခုကြားဗွီဒီယိုရင်းမြစ်ကိုပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည့်ကိရိယာသို့ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိလာသည် - HDMI ကိုပြောင်းပါ.
ဒီကိရိယာလေးကသင့်ကိုခွင့်ပြုပါတယ် HDMI ကြိုးနှစ်ခုကို input အနေဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီးတစ်ခုတည်း HDMI signal output (output) ကိုထောက်ပံ့ပါ။, သောမော်နီတာမှစလှေတျပါလိမ့်မည်။ PC တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမှာက၎င်းကိုနှိပ်ပါ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေသည် (မကြာခဏတက်ကြွနေသောအရင်းအမြစ်ကိုအလျင်အမြန်ဖော်ထုတ်နိုင်သည့်တောက်ပသော LEDs နှစ်ခုဖြင့်လိုက်ပါလေ့ရှိသည်)၊ ချိတ်ဆက်ထားသော PC နှစ်ခုအကြား switch လုပ်ရန်နှင့်မော်နီတာပေါ်ရှိအလိုရှိသောကွန်ပျူတာမှဗီဒီယိုကိုသာပြရန်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသတင်းများအရကျွန်ုပ်တို့သည် Amazon မှသင်အမှန်တကယ်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်သင်ဝယ်ယူနိုင်သောအကောင်းဆုံး HDMI ခလုတ်များကိုစုဆောင်းထားသည်။
Techole Switch HDMI Bidirezionale (ယူရို ၉)
GANA လူမီနီယံနှစ်ဖက်စလုံး HDMI switch (€ 11)
Techole HDMI ခလုတ် (€ 12)
ဒီပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်လိုက်ရင်သူတို့လိုသေချာအောင်လုပ်ကြည့်ရအောင် bidirectional HDMI switches များ ဒါမှမဟုတ်သူတို့က "2 input ကို -1 output ကို"ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်ုပ်တို့လိုမျိုးအလားတူပေမယ့်လွန်စွာကွဲပြားခြားနားတဲ့စက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးကို ၀ ယ်ယူဖို့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်HDMI splitter, ထိုမော်နီတာနှစ်ခုကိုအတူတူပင် PC (ကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်တစ်ခုလုံးကိုအခြေပြုသောအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောမြင်ကွင်း) ကိုဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာနှစ်ခုကိုမော်နီတာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့လိုအပ်သည့်အရာများအားလုံးပြီးပြီ ဖြစ်၍ နောက်ဆုံးပြင်ဆင်မှုကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ HDMI ကေဘယ်လ်များကိုအက်ကွဲ၊ မော်နီတာနှင့်ကွန်ပြူတာများနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ၊ မော်နီတာကိုဖွင့်ပြီးကွန်ပျူတာနှစ်ခုအနက်တစ်ခုကိုဖွင့်ပါ။ HDMI switch သည် HDMI cable များမှ current ကို အသုံးပြု၍ သူ့ဟာသူဖွင့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်သည်ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ PC 1 သို့မဟုတ် PC2မှဗီဒီယိုများကိုကြည့်ပါ; အရာရာတိုင်းဟာပိုပြီးပေါင်းစည်းမှုရှိအောင်ငါတို့လမ်းညွှန်ရဲ့အဆင့်တွေကိုလိုက်နာနိုင်တယ် ကွန်ပျူတာနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောအရာများကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက် mouse နှင့် keyboard တူညီသည်ကွန်ပျူတာနှစ်ခုကြားမှာ mouse နဲ့ keyboard ကိုမျှဝေနိူင်တယ် (တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာ switch နှစ်ခုပါလိမ့်မယ်၊ တစ်ခုက HDMI နဲ့ USB တစ်ခုပါ။ ) HDMI switcher ကိုလည်းသုံးနိုင်သည် console နှစ်ခုကိုရုပ်မြင်သံကြားတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ သူ့မှာ HDMI port တစ်ခုပဲရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်က TV ကိုမပြောင်းစရာမလိုဘဲ (ဒီထက်ပိုကြီးတဲ့ကုန်ကျစရိတ်) နှစ်ခုလုံးကိုအသုံးချနိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ မော်နီတာနှစ်ခုကိုကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်း၌သာအသုံးပြုလိုလျှင်၊ သီးသန့်ဗီဒီယိုကဒ်၏ HDMI port များကိုအသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်များကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ Monitor နှစ်ခုကို PC နှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်နည်း mi မော်နီတာနှစ်ခုနှင့်အလုပ်လုပ်ရန် Windows 10 တွင်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုတပ်ဆင်ခြင်း.
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသောမော်နီတာတွင် HDMI port မရှိပါကကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်များတွင်တွေ့ရသောမော်ဒယ်များအကြားရွေးချယ်ခြင်းကိုပိုမိုမကြာသေးမီကပြောင်းလဲရန်အချိန်တန်ပြီ။ ယူရို ၁၀၀ မှ ၂၀၀ ကြားဝယ်ရန်အကောင်းဆုံး PC မော်နီတာများ mi Buy 21:9Wide Monitor (Ultra Wide Screen).
USB Flash Drives သို့မဟုတ် External Drives များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိ - အားလုံးအဖြေများ
ဖြစ်ရပ်မှန်သမိုင်းနှင့်အတူ Windows လုပ်ဆောင်ချက်များကိုစစ်ဆေးပါ
Windows Printer History ကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲ
ဗွီဒီယို streaming များပိုကောင်းအောင် Windows တွင်ဟာ့ဒ်ဝဲအရှိန်ကိုပိတ်ထားပါ
သင်၏တိုးချဲ့ထားသော desktop PC တွင်မော်နီတာနှစ်ခုကိုစီမံပါ
Microsoft .NET Framework၊ အမှားများကိုတပ်ဆင်ပြီးဖယ်ထုတ်ပါ
ဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်းမှ Windows အမှားများကိုပြုပြင်ပါ